Comment faire de la hotspot
Paunenge uchifamba, iwe ungangoda kugovera yako iPhone's cellular data neyako Windows 10 laptop kuitira kuti iwe ushande pabasa. Iyo inovakwa-yako pachako hotspot ficha mu iPhone / iPad inokubvumira iwe kugovana yako iOS mudziyo kubatana kwewebhu nemimwe mimwe michina.
Kana zvasvika pakugovana cellular data, unogona kana kugovera internet kubatana pamusoro pe-Wi-Fi, Bluetooth kana USB tambo.
Mune ino giredhi, tichaona nzira yekumisikidza yako hotspot pane yako iPhone / iPad uye ipapo kubatana Windows 10 laptop kune iPhone hotspot.
batanidza Windows 10 PC kune iPhone's hotspot pamusoro peWi-Fi
Step 1: Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kuvhura zvese zviri zviviri Wi-Fi uye Bluetooth pane yako iPhone. Iwe unogona kuita izvozvo nekuvhura Zvirongwa uye nekuvhura Wi-Fi uye Bluetooth.
Step 2: Tevere, ngativhurire iyo Hotspot yega pane yako iPhone. Kuti uite izvozvo, enda ku Settings > Hotspot Yomunhu.
Ndokumbira kuti uone kuti yako Hotspot sarudzo haizovipo kana nharembozha yadzimwa. Saka, kana iwe usingakwanise kuwana Yemunhu Hotspot, zvingangoitika nekuti nharembozha inodzimwa.
Step 3: Batidza Hotspot Yomunhu sarudzo. Iwe unofanirwa ikozvino kuona iyo password yekutanga yehotspot.
Kana iWi-Fi neBluetooth zvadzimwa pane yako iPhone, iwe unowana inotevera ziviso. Tinya Tarisa paWi-Fi uye Bluetooth sarudzo yekuvhenekera uye kuvhenekera munhu Hotspot.
Step 4: On your Windows 10 PC, ita shuwa kuti Wi-Fi yakavhurwa. Kuita zvakafanana, vhura Settings > Network & Internet > Wi-Fi, uye ita shuwa kuti sarudzo yeWi-Fi inotsemurwa.
Step 5: Click on wireless icon mu system tray nharaunda yebasa rebhuya uye tinya mushure mekupinda kwako iPhone. Dzvanya batanidza bhatani.
Step 6: Paunokumbirwa kuisa pasiwedhi, ndokumbirawo upinde pasiwedhi iwe yaunogona kuona mune Yega hotspot chikamu che iPhone marongero (Zvirongwa> YeMunhu Hotspot).
Ndizvo! Iwe unofanirwa ikozvino kugona kutarisa pawebhu pane yako Windows 10 PC uchishandisa yako iPhone yekubatana internet.
batanidza Windows 10 Laptop kune iPhone's hotspot uchishandisa USB tambo
Kana, nekuda kwechimwe chikonzero, uri kutadza kubatanidza rako Windows 10 Laptop kune iPhone hotspot, unogona kushandisa yako iPhone USB USB tambo kubatanidza yako Windows 10 laptop kune iPhone's hotspot pasina nyaya.
Step 1: Dhawunirodha yazvino vhezheni ye iTunes pane PC yako uye Isa iyo yakafanana.
Step 2: Batanidza yako iPhone kuti Windows 10 laptop ichishandisa tambo yekuchaja. Kana iwe ukawana iyo inotevera skrini pane yako iPhone, tinya Ruvimbo.
Step 3: Pane yako iPhone, enda ku Settings > Hotspot Yomunhu. Zvekare, kana iyo Hotspot yega isingawanikwe, ndapota vhura iyo data renhare.
Step 4: Zvadaro, fambai kuenda Settings > Hotspot Yomunhu. Batidza Hotspot Yomunhu.
Step 5: Your Windows 10 Laptop inofanirwa kubatanidza otomatiki kune iPhone's hotspot izvozvi.
Iwe unogona kutanga kubhurawuza webhu pane yako Windows 10 laptop izvozvi.
sei chinjana mafoto kubva ku iPhone kuenda Windows 10 PC mutungamiri anogona kukufarirawo.
Hwindo 10 Haricherechedze iPhone Hotspot & Haikwanise Kubatanidza
Maitiro ekuTendeuka yako Android chishandiso kuita iPhone
7 Nzira dzekudzima Windows 10 Laptop Screen